स्थानीय तह संचालन ऐन पालना भएन::Online News Portal from State No. 4
स्थानीय तह संचालन ऐन पालना भएन
महिनै सम्म बैठक संञ्चालन नभएको,सार्वजनिक सुनवाई र अर्थिक कारोबार नगरपालिकामा ऐन विपरीत
बागलुङ, २६ असोज — स्थानीय सरकार संचालन ऐनले हरेक महिना बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर यहाँको बागलुङ नगरपालिकाले महिनौंसम्म बैठक नराख्दा महत्वपूर्ण काम प्रभावित हुने गरेका छन् । अघिल्लो बर्ष मंसिर, चैत र गत असारमा मात्र बैठक बसेको थियो । गत असारको बैठक पनि नगर परिषदमा मात्र केन्द्रीत भएकोले नगरक्षेत्रको विकास निर्माण, नयाँ नीति निर्माण र अनुगमनका काम प्रभावित भएको वडा अध्यक्षहरुले गुनासो गरे । नगर प्रमुख बिदेश भ्रमणमा जाँदा पनि बैठक नराखेको, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने बिषयमा एकपटक पनि चासो नराखेको र आर्थिक कारोवारका काममा पनि नगरप्रमुखले एकल निर्णय लिएको उनीहरुको आरोप छ । अघिल्लो बर्षदेखि संचालन भएको बलेवा एयरपोर्ट नियमित गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश समेत नभएकोमा वडा अध्यक्षहरुको टिप्पणी थियो । गत आर्थिक बर्ष एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाई पनि भएको थिएन ।
त्यसबारे वडा अध्यक्षले प्रश्न उठाएका थिए । ‘ऐनको प्रावधान मिचेर धमाधम खर्च गर्ने, आूफुखुसी भ्रमणमा जाने काम राम्रो होइन’ वडा नं. ४ का अध्यक्ष धु्रबबहादुर केसीले भने, ‘विकास निर्माण र नमूना अभियान संचालनमा भन्दा नगरप्रमुख आन्तरिक विवादमा मात्र मुछिएका छन् ।’ नगरले अलपत्र छाडेका अधिकांस काम कर्मचारीको कारण भएको भन्दै उम्कने प्रयास गरेको उनले टिप्पणी समेत गरे । ‘कर्मचारीले काम गर्न नदिएको भए को को हुन् ? उनीहरुलाई सार्वजनिक गरौं भन्दा नमान्ने’ उनले भने ‘गरेनन् भनेर मात्र भएन ।’ जनप्रतिनिधिले के गरियो भनेर जवाफ दिने ठाउँ बनाउन नसकेको उनले बताए । अघिल्लो बर्षका कामको समीक्षा गर्न नगर प्रमुख तयार नभएपछि मंगलवारदेखि शुरु भएको बैठक अवरुद्ध भएको छ । नगरप्रमुखले ल्याउन खोजेका एजेण्डामा नगर कार्यपालिका प्रवेश नगरेको वडा नं. ८ का अध्यक्ष राजन केसीले बताए । ‘नियमित बैठक गरौं, साना–तिना समस्या पनि समयमै पार लगाऔं भनेका हौं, तर लामो समयसम्म बैठक नबसेको कारण बताउन पनि अप्ठ्यारो मान्नु भएको छ’ केसीले भने, ‘ऐनमा हरेक महिना बैठक बस्नुपर्ने भनेकोमा हामीले उलंघन गर्न मिल्दैन ।’ नगर प्रमुखको कामबाट पटक–पटक उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले पनि असन्तुष्टी जनाईरहेका छन् । असारे विकास र दशै लक्षित विकासका लागि खर्च भएको लाखौं रकमबारे पनि बिना निर्णय निकासा भएको वडा अध्यक्षहरुको आरोप छ । हाल झण्डै एक करोड बढी रकम सडक मर्मत लगायतमा खर्च भैरहेको छ । जेष्ठ नागरिक सम्मान लगायतका कार्यक्रममा भएको खर्च बारेपनि बैठकको एजेण्डा नबनेको सार्वजनिक टिप्पणी भैरहेको छ । नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले भने बिदेश भ्रमण व्यक्तिगत खर्चमा गएको बताए । कतिपय काम व्यबहारिक रुपमा गरेर पास गर्ने बाध्यता हुने समेत बताए । ‘बैठकको निर्णयबाटै काम भएका छन्’ उनले भने, ‘केही अपरझट र सशर्त आएका बजेटमा कार्यपालिकको निर्णय कुरिरहनु पर्दैन ।’ काम नरोकिने गरी अगाडि बढाउन पहल गरेको उनले बताए ।